Maraykanka Oo Ka Hadalay Weeraro Uu Ka Fuliyay Gudaha Somalia AwdalMedia Awdalmedia Maraykanka Oo Ka Hadalay Weeraro Uu Ka Fuliyay Gudaha Somalia
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaan ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay oo ku beegneyd 9/3/2020 ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Janaale ee Gobalka Shabeellaha Hoose,isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen Afar xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab,sidoo kalena ay ku taageerayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab,sida uu sheegay Agaasime kuxigeenka Howlgalada Africa ee Marykanka Miguel Castellanos.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Imminka ay qiimeyneynaan inaysan jirin qof rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan.
“Mareykanka waxay si dhow ula shaqaysaa la-hawlgalayaasha caalamiga ah dadaallada la xiriira horumarinta waaxda amniga, oo ay ka mid yihiin Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Midowga Afrika, AMISOM iyo waddamada kale ee ku tabaruca ciidamada Wadajir ahaan, waxaa naga go’an horumarka Soomaaliya ee sii kordhaya ayaa lagu yiri”Qoraalka Mareykanka.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2020 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya,isla markaana uu la beegsanayo Xarumaha Al-Shabaab iyo Daacish-ta ka Soomaaliya,waxaana bilihii ugu dambeysay duqeyntii ugu badneyd uu ka fuliyey Gobolada Jubbada Dhexe iyo Shabeelaha Hoose.
Cabdilaahi Jawaan Oo Karbaashay Muuse, Ciro, Faysal Iyo Siyaasiyiinta Somaliland